musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » kutakura » Colombia inorambidza Uber
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Colombia Breaking News • nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Dhipatimendi reIndasitiri nekutengeserana kweHurumende yeColombia yakazivisa mirau mitsva, ichirambidza basa ra ber Munyika.
Zvinonzi sangano iri rakatsigira mutengesi wetekisi weko Cotech, achiti Uber iri kukonzera kubuda kwevatengi vemakombi etekisi nemitemo yekukwikwidza kutyora.
Uber inoti ine mamirioni maviri evatengi uye 2 madhiraivha muColombia.
Chirevo chitsva cheDhipatimendi reIndasitiri nekutengeserana chinotanga kushanda nekukasira.
Sekureva kwenhau dzemuno, Uber akakwirira kuDare Repamusorosoro reColombia.
Pakutanga, mudzvanyiriri weTurkey Recep Tayyip Erdogan akazivisa kurambidzwa kwezviitiko zvekambani yeAmerica Uber muTurkey.
Uber akamanikidzwawo kumisa mashandiro muBulgaria, Denmark neHungary.